काठमाडौं महानगरलाई सुधार गर्ने योजना के छ?- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौं महानगरलाई सुधार गर्ने योजना के छ?
वैशाख २२, २०७४ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं — काठमाडौं महानगरपालिका मुलुककै सबैभन्दा धेरै जनघनत्व भएको ठाउँ हो । त्यसैगरी स‌ंघीय राजधानी पनि यही भएकोले यसको बिशेष महत्व छ । यतिमा यसको परिचय सकिंदैन । सबैभन्दा सायद सबैभन्दा अव्यवस्थित र प्रदुषित पनि छ । अव आफुले जितेपछि काठमाडौं महानगरलाई सुधार गर्नका लागि के कस्ता योजनाहरु छन् ? उम्मेदवारहरु काँग्रेसका राजुराम जोशी र एमालेका विद्यासुन्दर शाक्यसंगको कुराकानी:
प्रकाशित : वैशाख २२, २०७४ १५:५६
परराष्ट्रमन्त्री महत र स्वराजबीच भेटवार्ता
वैशाख २२, २०७४ कमलदेव भट्टराई
नयाँ दिल्ली — परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपालमा विदेशी लगानीको विशेष सुरक्षा गरिने बताएका छन् । थाइल्यान्डस्थित नेपाली राजदूतावास र सिङ्गापुरस्थित नेपाली अवैतनिक महावाणिज्य दूतावासद्वारा बिहीबार साँझ सिङ्गापुरमा आयोजित नेपालको पर्यटन, व्यापार तथा लगानी सम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा लगानीका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका हुन् ।
भारत भ्रमण रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीचमा भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्तामा नेपालमा हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचत तथा द्विपक्षीय सम्बन्धका बहुआयामिक विषयहरुमा छलफल भएको छ ।
भेटपछि कान्तिपुरसँग कुराकानी गदै महतले नेपालमा हुन गइरहेको निर्वाचनको सम्बन्धमा स्वराजले सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेको जानकारी दिए । सो अवसरमा स्वराजले निर्वाचनको लागि आवश्यक सामाग्री सहयोग गर्न तयार रहेको बताएकी थिइन् । महतले समाजका सबै तह र तत्कालाई समेटेर निर्वाचन गराउन नेपाल सरकारले गरिरहेका प्रयासहरुको बारेमा समेत स्वराजलाई जानकारी गराएका थिए ।
महतले निर्वाचनमा सहयोग गरेकोमा भारत सरकारलाई धन्यवाद समेत दिएका थिए ।‘मैले नेपालमा हुन गइरहेको निर्वाचनको बारेमा जानकारी गराएँ । उहाँले छिमेकमा हुन भइरहेको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो,’भेटपछि महतले भने । सो भेटमा दुई देशको बीचमा जारी विकासका परियोजना तथा सहकार्यको विषयमा समेत छलफल महतले जानकारी दिए ।
हालैका दिनमा दुई देशको बीचमा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्ता तथा भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाएको निष्कर्ष समेत महत र स्वराजले निकालेका छन् । ‘दुई देशको बीचमा पछिल्लो समयमा भएका उच्चस्तरीय भ्रमणले सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाएको छ,’महतले भने । महत दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको एक सेमिनारमा भाग दिन दिल्ली आएका हुन् ।
राजमार्ग की मृत्युमार्ग ?
विमान दुर्घटना आयोगले काम थाल्याे
विमान दुर्घटनाका घाइते भन्छन्, ‘नयाँ जीवन पाएँ’ [भिडियो]
यसरी भइरहेको छ, घाइतेहरुको उपचार केएमसीमा
'मिस अप्रोच' ले यूएस बंगलादेश विमान दुर्घटनाः विमानस्थल
यस्तो देखियो, यूएस बंगला विमानको दुर्घट्नास्थल (भिडियो)